मुद्रास्फीति बढ्यो, चालु खाता र शोधनान्तर घाटा, कुन बस्तुको निर्यात बढ्यो ? « Canada Nepal
मुद्रास्फीति बढ्यो, चालु खाता र शोधनान्तर घाटा, कुन बस्तुको निर्यात बढ्यो ?
काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मुद्रास्फीति, चालु खाता र शोधनान्तर घाटा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित भएर आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा गत चैतमा मुलुकको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । सोही महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १४.४२ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.१४ प्रतिशत थियो ।
प्रकाशित मिति : बैशाख २८, २०७९ बुधबार ७ : २५ बजे